Hoy i Armenia tsia amin'ny UNWTO, nahoana?
Home » Travel Associations News » Hoy i Armenia tsia amin'ny UNWTO, nahoana?
Iray volana lasa izay, ny minisitry ny fizahantany Armeniana, Hon. Vahan Martirosyan, nanatevin-daharana kandidà 6 hafa hifaninana amin'ny hazakazaka voafidy ho Sekretera jeneraly vaovao an'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO).
Tamin'ny herinandro i Armenia no nisintona ny fanendrena azy. Ny fanesorana an'i Armenia dia mbola tsy nambara tamin'ny fomba ofisialy fa tafaporitsaka tamin'ny eTN.
Ny loharanom-baovao eTN dia nanolo-kevitra fa ny fanapahan-kevitra hisintona dia mety ho vokatry ny iray amin'ireo fanontaniana mampiahiahy ao ambadiky ny fifampiraharahana teo amin'ny filohan'ny Georgia, Giorgi Margvelashvili, sy ireo mpitondra firenena hafa.
Georgia dia nanendry ny ambasadaorony ankehitriny ao amin'ny UNWTO any Madrid, Hon. Zurab Pololikashvili hilatsaka amin'ny toerana ambony indrindra amin'ny fizahan-tany manerantany. Ny filohan'i Georgia Martisoyan dia naneho fanohanana lehibe ho an'ny kandidàn'i Georgia. Nisy insider nilaza tamin'ny eTN: "Ny tena kandidà dia filoham-pirenena ho an'i Georgia dia Giorgi Margvelashvi."
Ankoatr'izay, ny loharanom-baovao eTN dia manondro ny fisintomana an'i Armenia dia mety ho nifototra tamin'ny dinika toy izany ary tamin'ny fifanarahana fifanomezan-tànana teo amin'ny filohan'ny Georgia, sy ny filohan'ny Armenia, Serzh Sargsyan, mba hanamorana ny filan'ny tsirairay izay tsy voatery misy ifandraisany amin'ny fizahantany.
Azerbaijan dia fantatra ho mpifaninana, ny sasany milaza fa fahavalon'i Georgia. Ny gazety Azerbaijan dia nitatitra androany: "Nanatevin-daharana ny tolona ho an'ny toeran'ny Tale jeneralin'ny UNESCO, Azerbaijan dia nanalavitra ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana ny sekretera jeneralin'ny UNWTO ary miatrika loza mety hanimba ny fifandraisana amin'ny World Tourism Organization, amin'ny maha olom-pirenen'i Armenia anao manana fotoana hitarihana azy. ”
eTN dia miankina amin'ny loharanom-baovao fantatra, tsy afaka manamarina tsy miankina amin'izao fotoana izao.
Ny sandry vy eo amin'ny Vondrona Eropeana sy Etazonia amin'ny fitsipiky ny visa vaovao
Ny fihenan'ny fifamoivoizana an-dranomasina hita mialoha ho an'i Italia